Doodwadaag waa Danwadaag. | Ujeeddada
Inaan ka qayb qaadano dadaalada la isugu soo dhaweynayo soomaalida kala aragtida duwan iyadoo loo marayo dariiqooyinka wacyi gelinta dadweynaha iyo dood wadaag, si loo helo bulsho u bisil dawladnimada iyo wada noolaashaha.
Inaan abuurno maskax soomaaliyeed oo u fekerta si Soomaalinimo ah, kana fog wax walba oo ka hor imaanaya soomaalinimada, iyada oo laga xoreynayo maskaxda waxyaabaha xabiska geliyey, oo ay ugu horeeyaan qabyaalada iyo fahamka qaldan ee loo tiiriyo diinta islaamka ee sharafta badan.
Inaan ciribtiro kala faquuqa umadda Soomaaliyeed, ha ahaado mid ku salaysan hayb, jinsi, aragti diin iyo mid siyaasadeed ba, iyadoo loo ololeynayo sidii sinaan iyo cadaalad uga hirgeli lahayd geyiga soomaaliyeed, islamarkaana dadka laga dhaadhiciyo in, xadgudub loo gaysto qof soomaali ah uu yahay mid loo gaystay Soomaalida dhan.
Inaan u hawl-galno sidii qofka Soomaaliga ah u baran lahaa xuquuqda uu ku leeyahay dawladiisa iyo dadkiisa iyo tan isaga lagu leeyahay. Tusaale in qofka Soomaaliga ah la kala baro, waxa ay kala yahiin Qaranimo (Dawladnimo) iyo xukuumad.Inaan sare u qaadno dhaqanka, hiddaha iyo afka soomaaliga iyadoo laga fogaanayo caadooyinka ka hor imaanaya anshaxa wanaagsan ee diinta islaamka.
In la jiheeyo dhalinyarada soomaaliyeed, iyada oo loo samaynayo wacyi galin iyo xirfado ay ku shaqaystaan iyo madadaalooyin kale, si ay u bartaan nolosha ugana maarmaan ka qayb qaadashada dagaalada.